Home Wararka Shaqaale ka tirsan shirkadda Hormuud oo Muqdisho lagu dilay
Shaqaale ka tirsan shirkadda Hormuud oo Muqdisho lagu dilay
Koox hubeysan ayaa maanta labo qof oo shacab ah ku dilay isgooska Bakaaraha ee Magaalada Muqdisho.
Wararka ayaa sheegaya in koox hubeysan ay halkaasi dil ugu geysteen shaqaalle ka tirsan shirkada isgaarsiinta Hormuud ee Soomaaliya ka howlagasha.
Dadka la dilay ayey Goobjoogayaasha sheegeen in ay ka tirsanaayeen mid ka mid ah Sharikadaha Isgaarsiinta ee ka howlgala Soomaaliya.
Ciidamada Dowladda Federaalka ah ayaa gaaray halkii uu dilka ka dhacay,waxaana ay halkaas ka sameeyeen howgal kooban oo aan wali la sheegin cid loo soo qabtay.
Dhaq dhaqaaqa dadka ayaa hakad galay muddo kooban inkasta oo markii dambe uu dib u furmay sida ay sheegeen dad ku sugan suuqa Bakaaraha.
Maalmihii dambe ayaa waxaa Magaalada Muqdisho kusoo badanaayay dilka loo geysto shaqaalaha shirkadaha ganacsiga ee Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya ayaan weli gacanta kusoo dhigin dadka dilka geysanayo, sidoo kalana lama yaqaan illaa hadda sababta loo ugaarsanayo Shaqaalaha Shirkadda Isgaarsiinta Hormuud.
Previous articleMuuse Biixi oo sheegay in aanay marna Somaliland wadahadal lama galayn Muqdisho
Next articleAnsixinta sharciga Hanti Dhowrka oo dood kulul ka socoto golaha BJFS
Breaking News: Hantidhowraha Guud oo ay Xafiiska RW ku soo Xerteen...
Farmaajo oo ka hadlay Guusha Ismaaciil Cumar Geelle